Meydka Wariye Axmed Xuseen Cadoow oo la aasay - Awdinle Online
Meydka Wariye Axmed Xuseen Cadoow oo la aasay
Alle ha u Naxariistee waxaa Maanta qabuuraha Iskuul Bulusiya ee Magalada Muqdisho lagu Aasay Wariye Axmed Xuseen Cadoow oo ka tirsanaa Warbaahinta Dalsan, kaas oo xalay ku geeriyooday Isbitaalka Yardameeli ee Magaalada Muqdisho
Axmed Xuseen Cadoow ayaa muddo todobaad ah la jiifay Isbitaalka xanuun ka haayay dhinaca wadnaha ah, kaas oo ugu dambeyn uu u geeriyooday xalay xilli dambe, waxaana ehelkiisa ay sheegeen in ay dhibeysay in uu neefsado.
Aaska Wariye Axmed Xuseen Cadoow ayaa waxaa ka qeyb galay, Qaar kamid ah ehelkiisa, saaxiibadiisii gaarka ahaa, inta badan Wariyeyaasha Magaalada Muqdisho oo ay kujiraan kuwo ay isla soo Shaqeeyeen iyo Maamulka Sare ee Warbaahinta Dalsan.
Gudoomiyaha guud ee Warbaahinta Dalsan Maxamed Cajiib oo Goobta Aaska ka hadlay ayaa marka hore u tacsiyadeeyay ehelkiisa, waxaana uu balan qaaday in Mushaarkii uu ka qaadan jiray Idaacadda ay sidii u bixin doonaan, sidoo kale ay waxbarasho ka bixin doonaan Carruurtiisa.
Qaar kamid ah Wariyeyaashii ay iska soo Shaqeeyeen Warbaahino kala duwan oo ku yaal magaalada Muqdisho ayaa dhanooda uga tacsiyadeeyay ehellada, Saaxiibada iyo qoyskii uu ka geeriyooday Alle ha u Naxariistee Wariye Axmed Xuseen Cadoow, iyaga oo sheegay in uu ahaa Saaxiib dabeecad wanaagsan.
Alle ha u Naxariistee Wariye Axmed Xuseen Cadoow ayaa inta la xaqiijiyay waxaa uu Ifka kaga tegay hal Xaas oo uur leh & Saddex Carruur ah, waxaana in muddo ah uu ku jiray Bahda Saxaafadda, isaga oo kasoo Shaqeeyay dhowr Idaacadood oo ku yaal Magaalada Muqdisho.
Previous articleSacuudiga oo Muwaadiniintiisa ka mamnuucay inay u socdaalaan Soomaaliya
Next articleBeeraleyda Jaadka Kenya oo ka hadlay tallaabadii lagu joojiyay duulimaadyada Soomaaliya